Ungadla kuphi eLisbon | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Gastronomy, Lisboa, Ukuzilibazisa
La Inhlokodolobha yasePortugal iyindawo evame ukuvakashelwa ngobuhle bayo obukhulu, ngokubona imigwaqo yayo kodwa nange-gastronomy yayo emnandi. Leli yidolobha okungamele libonwe ngezinyawo kuphela, kodwa futhi lisimema ukuba sime ezindaweni zokudlela eziningi elinalo. Ngaphezu kwalokho, awudingi ukuchitha imali enkulu uma ufuna ukudla kahle eLisbon.
Ake sibone ukuthi yiziphi izitsha ze- I-gastronomy yesiPutukezi esingayinambitha ezindaweni zokudlela. Kufanele futhi ubone ezinye zalezi zindawo ngokungangabazeki ukuthi zingaba yindawo ongazivakashela. Ngoba akumele sikhohlwe ukuthi i-gastronomy ihlale iyingxenye ebalulekile yokuhamba.
1 Yini ongayidla eLisbon
2 Ungadla kuphi eLisbon
2.1 I-Principe do Calhariz
2.5 I-Nectar WineBar
Yini ongayidla eLisbon
Ukwazi ukuthi ungaya kuphi uma sifuna ukudla kahle kubalulekile nokubaluleka kokwazi ukuthi sifuna ukudla ini. I-gastronomy yesiPutukezi igcwele izitsha ezimnandi nophudingi abaziwayo, ngakho-ke kufanele kucace ukuthi yiziphi izinto esifuna ukuzizama lapho siya ezindaweni zokudlela. Izitsha ezifaka i-cod ziningi, ngoba ingesinye sezithako zezinkanyezi, kanye nezinye izinhlanzi. Ungakhohlwa amakhilomitha asogwini ePortugal. Ama-bacalhau á bras ama-cod aqhekekile, i-bacalhau á lagareiro iyabhakwa kanti i-bacalhau com natas yenziwa ngokhilimu wobisi. Kepha ezitsheni zenhlanzi ezinosardadi, i-salmon noma i-tuna nazo ziyizimbangi.
Yize izitsha zezinhlanzi zaziwa kakhulu futhi zibalulekile, kukhona nezinye ezenziwe ngenyama. Esinye sezitsha zabo inkanyezi ingulube ye-alentejana. Le nyama yenziwa ngama-clams namazambane, ngenhlanganisela yangempela. Ezinye izinto esingazama eLisbon yi-vellum eyosiwe, eyenkomo eyosiwe, noma i-frango eyosiwe, eyinkukhu eyosiwe, i-classic engasoze yehluleka.
Kunezinye izitsha ezithandwa kakhulu njenge-caldo verde, okuyisobho seklabishi. Phakathi kophudingi babo asikwazi ukukhohlwa i-pasteis de Belem, eyi ukhilimu amakhekhe noshukela okaqweqwe nesinamoni oluyimpuphu. Lezi zibiliboco kumele zizanywe zisanda kwenziwa. Amanye amaswidi ngamaqebelengwane amaqanda e-Alentejo, irayisi elimnandi noma i-bolo de bolachas, ikhekhe elibandayo lamabhisikidi.
Ungadla kuphi eLisbon
ELisbon singathola izindawo zokudlela ezikhethekile kepha nezindawo eziningi zokudla kahle ngama-euro angamashumi amabili noma ngaphansi. Futhi, ungakhohlwa ngalezo zokudlela zakudala lapho ungathokozela ne-fado, umculo wakhe othandwa kakhulu. Ngakho-ke ake sibone ezinye zazo ezingaba nentshisekelo.
I-Principe do Calhariz
Lena indawo yokudlela yase umoya okhululekile futhi ojwayelekile kakhulu lapho ungadla khona ukudla okuvamile kwesiPutukezi. Kuyindawo yokudlela eseduze nendawo yaseChiado futhi inezinto ezibekiwe uma kungenzeka sithande inyama noma inhlanzi. Ngaphezu kwalokho, inemenyu ebanzi uma kwenzeka singazi kahle ukuthi sifunani.
Le ndawo yokudlela itholakala ICasa de Linhares negama lalo elisho ukuthi i-cod kusosoNjengoba isidlo esijwayelekile sasePutukezi silungiswa, kusinikeza umbono wendawo yokudlela. Sibhekene nendawo yakudala lapho singazama khona izitsha ezihamba phambili zesiPutukezi. Kepha le ndawo inokucaca ukuthi kuyo singalalela futhi enye yalawo mafashoni amahle esiPutukezi ngenkathi sinambitha ukudla kwasePutukezi.
Uma esikufunayo kungukuthi yokudlela yesimanje enesimo sezulu esiyinkimbinkimbiNgemuva kwalokho singaya eParque Eduardo VII ukuyodla isidlo sakusihlwa e-Eleven. Yavulwa ngonyaka we-2004 futhi namhlanje iyindawo yokudlela engenye yesimanjemanje lapho ungazama khona ukudla okuphekwe kahle kwamaPutukezi okwenziwe kuphela ngezitsha ezithile zonyaka nezitsha ezimnandi nezintsha. Kule ndawo yokudlela kuhlale kungcono ukubhuka kusengaphambili.
Este Indawo yokudlela eyingqayizivele itholakala endaweni yokugcina impahla evuselelwe lapho bengafakelanga kuphela ibha nendawo yokudlela, kodwa futhi nendawo ye-sushi nezikhala zemicimbi, kanye nehholo lombukiso. Indawo yesimanje enemibono emihle emfuleni.
Lesi sikhala bekuyindawo yokugcina impahla endala ebuye yalungiswa ukuze kunikezwe indawo yesimanje. Kule ndawo unganambitha Ukukhetha okuhle kakhulu kwewayini lesiPutukezi kanye newayini lomhlaba. Yingakho kuyindawo ekahle yabathandi balesi siphuzo ethola ukubaluleka okukhulu emazweni asePutukezi. Izifundo zokunambitha iwayini zihlelwe kule ndawo uma sinentshisekelo kuleso sihloko. Futhi, uma kwenzeka sihamba nomuntu ongaliphuzi iwayini, kunezinye iziphuzo ezifana netiye futhi banikela ngama-toast neminye imininingwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Gastronomy » Ukudla eLisbon
Uhambo oluya eziNtabeni zaseRocky
IKenya neGugu Layo Lomhlaba